कसरी बनाउन को लागी बहुरुस्तरी आगो
इन्द्रेणी रंगको लौमा साधारण ज्वाला बदल्न सजिलो छ। यो ज्वाला सामान्य जेल ईन्धन जलिरहेको गरी उत्पादन गरिएको थियो, जुन सजावटी माटो आगो बत्तीको लागि बेचीन्छ। तपाईं पोटहरू भर्खरै कुनै घर भण्डारको बारेमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ (जस्तै, लक्ष्य, गृह डिपो, वाल-मार्ट, लोभ)। जेल एकदम राम्रो तापमानमा जलाइन्छ, बिस्तारै कि एक सानो कपले घण्टापछि ज्वालामुखी बनाउँछ।
तपाईलाई यो प्रभाव डुप्लिकेट गर्न आवश्यक छ बोरिक एसिड जेलमा छिटो छ।
तपाईं बोरिक एसिड एक रच हत्यारा वा अपिनाफेक्चर पाउडरको रूपमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। केवल बोरिक एसिडको चुरोट आवश्यक छ। अन्ततः, जेल ईंन्धन उपभोग गरिनेछ, बार्सिलो एसिड पछि छोडेर। तपाईलाई रङ को लागी राख्न को लागी थप रासायनिक थप्न आवश्यक छैन, तर यदि तपाईलाई सामान्य ज्वाला फर्कन चाहानुहुन्छ भने तपाईले बोरिक एसिडलाई अर्को प्रयोग गर्नु अघि पानी संग कुल्ला गर्न आवश्यक छ।
कसरी इंद्रधनुष प्रभाव गर्दछ
बोरिक एसिडले आगोलाई वास्तवमा जलाइदिदैन। बरु, दहन को गर्मी नमक ionizes, एक हरी उत्सर्जन उत्पादन। जेल ईन्धनको रक्सीले नीलो जलाउँछ, पहेंलो र नारंगी तिर किनारिन्छ जहाँ ज्वाला कूलर हुन्छ। जब तपाईं अल्कोहल-आधारित ज्वाला राख्नुहुन्छ बोरिक एसिड उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सँग तपाईं इन्द्रधनुषको सबै भन्दा धेरै रंगहरू पाउनुहुन्छ।
बोरिक एसिड मात्र रंगीन आगो मात्र होइन। तपाईं तांबे लवण (नीलो सम्म हरियो), स्ट्रोन्टियम (रातो) वा पोटेशियम लवण (बैंगनी) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एक्लो नमक प्रयोग गर्नु उत्तम छ किनकी तिनीहरू सँगै मिश्रण गर्न बहुभाषी ज्वाला भन्दा बढी पहेँलो फूल उत्पन्न गर्दछ। यो किनभने किनभने उज्यालो उत्सर्जन सोडियम बाट आउँछ, जुन पहेंलो जलाउँछ र धेरै परिवारका रसायनहरु को एक धेरै साधारण प्रदूषक हो।
कसरी जेल एयर फ्रिज गर्नेहरू बनाउनुहोस्
क्रिसमस रसायन विज्ञान प्रदर्शन
कसरी लोभ बाहिर नाक अनाज प्राप्त
ज्वालामुखी व्यञ्जनहरू - तपाईंले रासायनिक ज्वालामुखीको लागि सामग्री पाउनुभएको छ
हेलोवीन रिएक्शन वा पुरानो नासाऊ प्रतिक्रिया
सल्फरिक एसिड र चीनी प्रदर्शन (चीनी देहडिजन)
बेकिंग सोडा स्टालिकैक्टाइट्स र स्टैलागाइट्स
जेसी ओवेन्स: चार समय ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट
दिशा निर्देशन दिने
असुविधाजनक परीक्षण सिकाउने: एबीए को निर्देशात्मक रिबन
भाषाविज्ञानमा कलिङको परिभाषा
गणित वर्कशीट: 10 मिनेट, पाँच मिनेट र एक मिनेट को समय बताउँदै
यी मजेदार Coincidences म्याट्रिक्स मा एक गड़बड हुनु पर्छ
अमेरिकामा प्रतिबन्धित गन अधिकारहरूको सुरुवात
Epsilon Eridani: एक चुम्बकीय युवा तारा
घाँस र क्रिकेट बीचको फरक कुरा कसरी बताउनुहुन्छ?
फाटिक संचार परिभाषा र उदाहरणहरू
शीर्ष ओहियो कलेजहरूमा प्रवेशको लागि ACT स्कोर
तपाईं रंग रङ व्हाइटकोलर पेंट कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
रोचेस्टर जीएपी विश्वविद्यालय, एसएट र एक्ट डेटा
पीतलको लागि तत्व प्रतीक के हो?
जमीन र स्थान को आत्माहरु
तेल-भरिएको स्पार्क प्लग भ्याक्स फिक्सिंग
उत्तरी क्यारोलिना एण्ड टी स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
5 रिपब्लिकन महिलाहरू प्रायजसो राष्ट्रपतिको टिकटमा ल्याण्ड गर्न चाहन्छन्
यसका लागी एक अर्काको ज्यान गएको छ
पत्रुस: "पारिवारिक केटा" उद्धरण
6 डार्विन भन्ने कुरा थाहा थिएन